छालाको स्कर्टहरूले न केवल तपाईंको खुट्टालाई लामो बनाउँदछ, तर तपाईंको शरीरको वक्र पनि देखाउँदछ। धेरै व्यक्तिहरू स्कर्टहरू वसन्त र गर्मी मौसमको लागि उपयुक्त लाग्छ। तर वास्तवमा शरद winterतु र जाडो यसको मुख्य रुपमा दर्साईन्छ। यो स्वेटर वा कोट लगाएको सुपर मोडल हो। शरद /तु / जाडोका लागि यो छोटो PU स्कर्ट नरम पु बनावट, उत्कृष्ट बान्की डिजाइन र प्रभावशाली बड घुमा प्रदर्शनको साथ एक सबै उद्देश्य वस्तु हो। स्कर्ट PU छालाको बनेको छ मजबूत हावाको पारगम्यता र कठोरताका साथ। यो प्रकाश र रेफरी छ ...
छाला स्कर्टन केवल आफ्नो खुट्टा लामो बनाउनुहोस्, तर तपाईंको शरीरको वक्र पनि देखाउनुहोस्। धेरै मानिसहरू सोच्दछन्स्कर्टवसन्त र गर्मी मौसम को लागी उपयुक्त। तर वास्तवमा शरद winterतु र जाडो यसको मुख्य रुपमा दर्साईन्छ। यो स्वेटर वा कोट लगाएको सुपर मोडल हो। शरद /तु / जाडोका लागि यो छोटो PU स्कर्ट नरम पु बनावट, उत्कृष्ट बान्की डिजाइन र प्रभावशाली बड घुमा प्रदर्शनको साथ एक सबै उद्देश्य वस्तु हो। स्कर्ट PU छालाको बनेको छ मजबूत हावाको पारगम्यता र कठोरताका साथ। यो हल्का र स्फूर्तिदायी छ। कपडाको आफ्नै चमक छ र सुपर सुन्दर र सौन्दर्य छ। मोटरसाइकल केटी होस् वा डेमोर आइमाई, ड्रपिping प्रक्रियाले शरीरको वक्रलाई पूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
कोटले उच्च कम्मर डिजाइन, सरल र सुरुचिपूर्ण, आरामदायक तर कडा होईन। बटन डिजाइन एक तर्फ सिलाई, सम्पूर्ण प्राकृतिक र मनमोहक देखा पर्छ। र सजावट भावना सम्पूर्ण स्कर्ट हेम सुस्त छैन बनाउँछ। हेममा विविध स्तर परिवर्तन डिजाइन अधिक फैशनेबल देखाउँदछ। अनियमित हेमलाइन डिजाइनले सबैभन्दा सानो डिजाइनको साथ आँखा समात्छ, जसले खुट्टाको आकार फैलाउन, लेयरि sense भावनालाई समृद्ध गर्न, र समग्र अझ पातलो बनाउन सक्छ, तत्काल शरीरको सुनहरा अनुपातको साथ। र्‍याप-नितम्ब मोडलले नाजुक शरीरको रूपरेखा वक्र देखाउन सक्छ, स्टाइलिश तर अलि बढी हो र महिला ग्लैमर पूर्ण रूपमा देखाउँदछ। यसको छनौट गर्न र color्गका प्रकारहरू छन्, र प्रत्येक र colorले तपाईंको युवा रिग्रेसन, मनमोहक र गतिशील महसुस गर्न सक्छ। यो नरम र आरामदायक छ बिना कडा महसुस र तपाइँलाई सौंदर्य भावना र आराम दिए बिना लगाउन। स्कर्टको विस्तृत टाँसहरू एकदम नाजुक छ, दौडिन बिना नै, र यो लुप्त बिना धुन सकिन्छ। सम्पूर्ण लगाउने प्रतिरोध र टिकाउपन बनावटमा उत्कृष्ट छ। स्कर्टको यो ढाँचा सफा छ। प्रत्येक सजावटी विवरण ठीक छ, पातलो र फैशनले भरिएको मात्रै होइन यसले अन्य कपडाको साथ यसको राम्रो टक्कोसन डिग्री पनि सुविधा गर्दछ। उमेर कम गर्न सजिलो, प्रभावी कभर फ्याट, उपयुक्त वस्तु जुन प्रत्येक परीले स्वामित्व प्राप्त गर्न चाहन्छ।
यहाँ हामी PU सामग्रीका केहि विशेषताहरु प्रस्तुत गर्दछौं:
१. तहमा स्थिरता प्राकृतिक छालासँग तुलना गर्न सकिन्छ। सामान्य तापमान क्र्याक बिना 200,000 पटक सम्म झुकाइन्छ। कम तापमान (-20 ℃) ​​crack०,००० पटक झुकाई बिना (तापमान प्रतिरोध, राम्रो मेकानिकल)।
२. उच्च शक्ति, पातलो र लोचदार, नरम र चिल्लो, राम्रो हावा पारगम्यता र पानी प्रतिरोध।
Super. सुपर लगाउने प्रतिरोध, उपस्थिति र प्रदर्शन प्राकृतिक छालाको नजिक छन्, धुने र सजिलैसँग सिग्न सजिलो, सिलाई सजीलो।
,, सतह चिल्लो र कडा छ, सतह को उपचार र रye्ग को एक विविध हुन सक्छ।
Production. उत्पादनबाट प्रयोग गर्न कुनै प्रदूषण छैन, उत्कृष्ट वातावरणीय प्रदर्शन।
अघिल्लो: महिला Miniskirt फैशन
एक टुक्रा पोशाक